Aanga'oonni Kongrasii Federaalawaa Oromoo (KFO)fi Paartiin Dimokraasii Dhugaaf (Baaldaraas) haala qabatamaa amma jiruun gara filannootti seenuun nu yaaddeessa jechuun BBCtti himan.
Paartileen kunneen kana kan jedhan Boordiin filannoo biyyaaleessaa filannoo biyyaaleessaafi naannoo bara kana gageeffamuu raawwachisuuf kan ta'u wixinee sagantaa yeroo ifa taasisuu isaa hordofunidha.
Itti gaafatamaan Waajjira KFO Obbo Xirunaa Gamtaa, ''aanga'oonni paartii keenyaa olaanoo hanga jidduu galaa hidhamunsaaniifi haalli qabatamaan jiru qophii filannoof taasifnu rakkiisaa taasisa,'' jechuun dubbatan.
Haaluma walfakkaatunis Ittigaafatamaan Biiroo Paartii Baaldaraas Obbo Galataa Zallaqaa, aanga'oonni paartichaa beellama mana murtii dheerate irratti akka argaman himuun, ''filannoon itti galluu baayyee nu yaaddeessa'' jedhan.
Dubbi himuun Boordii Filannoo Biyyaaleessaa Soliyaanaa Shimallis guyyoota muraasa dura turtii BBC waliin taasisaniin, ''paartileen siyaasaa hundi filannoon haa gaggeeffamu jedhan. Osoo filannoon hingaggeefamiin dura dhimmoota lamatu yaaddoo ta'a jedhan.
''Innis tokko haala nageenya biyyaati. Paartileen siyaasaa tokko tokko ammoo waajjirri isaanii akka jalaa cufamuufi miseensoonni isaanii irratti rakkiinni akka qaqabu himaniiru''jedhanii turan.
Gaaffilee walfakkaataa paartileen kaasaniif furmaata kennuu kan danda'u qaama hojii raawwachiftuu motummaati malee boordii filannoo akka hintaanees dubbataniiru.
Filannoo biyyaalessaafi naannoo marsaa jahaffaa bara kana gaggeeffamuuf wixinee yeroo boordii filannoo biyyaaleessaatiin ifa taasifameen guyyaan sagaleen itti kennamu Caamsaa 28 fi Waxabajjii 5.
Obbo Xirunaan miseensoonni isaanii hedduun hidhamu, kan hafan irra ammoo dorsiifni irra gahaa jiraachuufi waajiraaleen isaanii sadarkaa aanaafi godinaa jiran cufamusaanii eeruun, ''filannoo keessatti hirmaachuuf fedhii qabaannulleen haala rakkiisaa keessatti argamna'' jedhan.
Yaaddoo isaanii kanas kanaan dura ibsa baasaniin beeksiisu yaadataniiru.
Walgahii kaleessa boordiin filannoo gaggeesse ture irratti argamuunis yaaddoo isaanii kana hubachisuu kan dubbatan Obbo Xurunaan, ''rakkoolee sirreessuuf yaalii ni taasifna'' deebiin jedhu akka kennameef dubbataniiru.
''Haata'u malee rakkooleen humnasaanitiin ol ta'a tokko tokkoo jiraachusaanis hubanneera'' jedhan Obbo Xurunaan.
Akka KFO'tti murtee filannoo keessatti hinhirmaannuu jedhu irra gahuu baatanis, filannoo keessatti hirmaachuu haala isaan dandeessisu irra akka hintaane garuu mirkanneessuun himaniiru paartiin Baaldiraas.
Kanaaf waajirri isaanii cufamu, hidhaa miseensoota isaani, baqannaafi dorsiisa akkasumas rakkoolee bakkeewwan adda addaatti akka sababaatti eeraniiru.
''Haala akkasitiin motummaafi boordiin filannoo, filannoo gaggeessuu danda'u?'' jechuun gaaffii kaasu.
Manni murtii Olaanaa federaalaa Lidataa ramaddii tokkooffaa dhadhachi dhimmoota heera motummaafi shororkeessummaa, dura taa'aa partii Baaldaraas kan ta'an Obbo Iskindir Naggaa irratti ragaa abbaa alangaa akka dhageesisuuf Bitooteessa 29, 2013 beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Olmaa maan murtii kaleessaatiin gaddusaanii kan himan Obbo Galataan, ''beellamni Obbo Iskindir fa'i irratti gaafatame, namoota dhaggeettii qaban dorgommii ala taasisuun motummaan qofaas fiigee ''mo'ataadha'' jechuuf kan raawwatame fakkaata jechuun komatan.
Obbo Galataan, ''filannichi isuma akka kan bara TPLFtti barame sana ta'uuf'' jechuun gama isaanitiin abdiin itti mul'ataa akka hinjirre dubbatan.
''Miseensoonni keenya harii'atamaa jiru. Motummaan yeroodhaa gara yerootti dirree dhiphisaa jira. Dirree baldhataa hin adeemne keessatti ammoo filannoon seena qabeessa ta'e gaggeeffamu akka hindanda'amne mirkanneessaa jira'' jechuun himu Obbo Galataan.
Haalli kunis akka paartii qofaatti osoo hintaane dhunfaanis akka isaan yaaddessu hindhoksine.
Obbo Galataan, ''Filannoon kun akka durii sana waliin dhahamee ni adeemna yoo jedhame, tibbisaa kan ummanni nama hinadeemsine itti ka'e waan ta'eef, filannoon booda biyyatti gara jeequmsaatti akka hingalchineef ni yaachisa,'' jedhu.
Motummaan haalawwan jiran dafe sirreessuu yoo hindandeenye, filannichi seena qabeessa ta'unsaa hafee balaa qabatee dhufu akka danda'u yaaddoosaanii ibsaniiru.
Dubbii himtuun boordii filannoo biyyaaleessaa turtii BBC waliin taasisaniin ''paartiileen dhimmi rakkoon nu mudateera jedhan irratti bulchiinsa naannoo, komishinii poolisii ykn qaama dhimmi ilaallatu kan biraatti boordichi ni beeksiisa'' jechuun, rakkoolee mudatan hiikuuf yaaliiwwan waajjirriisaanii raawwataa jiru himaniiru.
Haaluma kanaanis paartiiwwan siyaasaa iyyata yoo qabaatan boordichatti barreeffamaan akka dhiyeessan gaafatanii, paartileen 11 rakkina isaan mudate boordichatti beeksiisuusaanii kan himan Soliyaanan, boorichi dhimmicha motummaatti beeksiisu himan.
Paartiileen naannoolee keessa socha'an ammo rakkoolee isaan mudatu ilaachisee adeemsi paartii bulchaa jiru, mootummaafi boordiin filannoo waliin marii gaggeefamuu diriirfamuu daarektarittiin himaniiru.
Aanga'ootaafii miseensa KFO fi Baaldaraas Obbo Jawaar Mahaammad, Baqalaa Garbaa fi Iskindir Nagaa, Aster Siyumii fi Sintaayehu Chakol yakka shororkessummaan himatamanii hidhaarratti argamu.
Boordiin filannoos Guraandhala 8 irraa kaasee galmee kaadhimamtootaa akka gaggeessuu fi duula na filadha akka taasisan kaleessa ibsameera.
Guraandhala 22 hanga Bitooteessa 21tti ammo galmee filattootaatu raawwatama.
Kana malees filannoon bulchiinsawwan Finfinneefi Diredhawwaa turban tokkoon Waxabajjii 5, 2013 akk gaggeefamu beeksiiseera.
Boordiin filannoo biyyaaleessaa filannoo biyyaalessaa itti aanuun filattoonni miliyoona 50 ta'an ni hirmaata jedhanii akka eegan beeksisuunsaa ni yaadatama.